वन मान्छेको खोरमा ४ वर्षीय बालक खसेपछि, त्यसले के गर्यो त्यो देखेर तपाईको मुटु काप्नेछ (भिडियो) - Rochak Khabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २७, २०७४ समय: १०:३५:५९
ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ राजविराज, ४ चैत (रासस) : रु २५ लाख पुरस्कार परेको भन्दै सर्वसाधारणबाट रकम ठगी गरेको आरोपमा सप्...
यो घट्ना हो भारतको राजस्थानको दिपावलीको दिनमा जब १३ वर्षीय एक बालक आफ्नो दिदीसँग होन्डाको शोरुममा गए स्कुटी रोजे अनि अचम...
फेरी आयो अन्डाको अर्को रहस्य !! अण्डा भित्र पनि अर्को अण्डा भेटिएपछि
कुखुरा पहिले कि अण्डा भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले पनि रहस्यमै छ । तर यो अण्डाको विषयमा फेरि अर्को रहर थपिएको छ । यो पटक क...
विश्वास नै नलाग्ने तर सत्य : यी व्यक्तिको शरीरबाट निस्किन्छ बिजुली ! भ्याकुम क्लिनर, पंखा, मिक्सर र बल्ब बालेर देखाईदिएपछि हेर्ने सबै चकित (भिडियो)
विश्वास नै नलाग्ने तर सत्य : यी व्यक्तिको शरीरबाट निस्किन्छ बिजुली ! भ्याकुम क्लिनर, पंखा, मिक्सर र बल्ब बालेर देखाईदिएप...